Wixii Android Devices:
Si uninstall ExactSpy Cell Phone Spy App laga bilaabo qalab bartilmaameed, waxaan leenahay 2 Xaaladaha:
1. Xaaladdan oo aad u sii heli karaa qalab bartilmaameed in aad gacanta
– If you have ExactSpy Spy App versions 1.4(maadaama ay taageertaa Auto Jawaab for Android), waa in aad shaqada barkinta admin Device in kulan Settings / More / Security. Haddii aad qabtid version ka weyn waxa aad tegi kartaa talaabo soo socda.
– Tag Settings / More / Ammaanka iyo garaac Application Manager oo guji Service System in ay uninstall.
2. Xaaladdan oo aad rabto in aad uninstall ExactSpy Cell Phone Spy App fog
– Login with xisaabtaada at http guddi ay gacanta ku user://my.exactspy.com
– Tag Settings menu on xaq u top, oo guji Uninstall menu
– Waxaa bandhigay foomka password, fadlan ku qor your password si loo xaqiijiyo aad rabto in aad meesha fog laga uninstall
– Click badhanka Uninstall meesha fog laga and it uninstall doona ExactSpy from the target device with some minutes(ilaa iyo inta uu la kulmo marka xigta synchronize)
Wixii Jaamacadda Camuud, Devices:
– Tallaabada 1: remove package ExactSpy : Codsiga cydia Launch. iyo tag maaray->Package iyo ka heli ExactSpy . Times Qaar ka mid ah waxa uu muujinayaa sida exactspy(7.1.x ceebeeyay),exactspy (3GS/4/4S/5/5C/5S). Tuubada waxa on hormariyo Modifi ka dibna tubbada ah ka saar.
– Tallaabada 2: Ka saar source Cydia: Kulan tubada on Cydia iyo Source qasabada, hesho meesha exactspy.con(http:// repo.exactspy.com ).Delete source in
– Waxaa bandhigay foomka password, fadlan ku qor your password si loo xaqiijiyo aad rabto in aad uninstall remotel
– Click badhanka Uninstall meesha fog laga and it uninstall doona ExactSpy Cell Phone Spy App from the target device with some minutes(ilaa iyo inta uu la kulmo marka xigta synchronize)